သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း လုပ်နိုင်တဲ့ လူသိနည — MYSTERY ZILLION
သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း လုပ်နိုင်တဲ့ လူသိနည
January 2009 edited March 2009 in Sharing
အသက်ကယ် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရှင်သန် ရုန်းကန် နိုင်ဖွယ်ရာ အရေးပေါ် အထောက်အကူ ပစ္စည်း ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့။
(၁) အရေးပေါ် အတွက်
keypad ကို locked လုပ်ထားရင်တောင် သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများဟာ 112 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို နှိပ်လို့ ရတာ တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနံပါတ်ဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၊ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ လက်ကိုင်ဖုန်း ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဧရိယာထဲမှာ ရှိနေပါစေ၊ ဒီနံပါတ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းဟာ အနီးဆုံး ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်ကို အလိုအလျောက် ရှာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းက ခလုတ်များကို ပိတ်ထားရင်တောင် ဒီနံပါတ်ကိုတော့ နှိပ်လို့ ရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံဘူးလား .. စမ်းကြည့်..
(၂) ကားထဲမှာ သော့တွေ ကျန်ခဲ့လား
သင့်ကားတံခါးမှာ အေ၀းထိန်းစနစ် ရှိပါသလား။ တနေ့မှာ အေ၀းထိန်း မဟုတ်ဘဲ လက်နဲ့ ဖွင့်ရမယ့် အနေ အထား ကြုံတတ်ပါတယ်။ ကားသော့ကို ကားထဲ ထည့်ခဲ့ပြီး အပိုသော့က အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ရင် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံး ရှိရတာ ဒီလိုအခါ ကျတော့ ကောင်းလိုက်တာ။ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သင့်လက်ကိုင်ဖုနး်ကနေ ခေါ်ပါ။ တဖက်က ပြန်ထူးနေရင် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကားတံခါးကနေ ခြေတလှမ်းအကွာမှာ ထားပါ။ နောက်ပြီး အိမ်ကလူကို ကားသော့ဖွင့်တဲ့ ခလုတ်ကို လက်ကိုင်ဖုန်းနားကပ်ပြီး နှိပ်ခိုင်းပါ။ ဟဲဟဲ.. စမး်ကြည့်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပျော်စရာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်မတို့ စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်တယ်ရှင့်။ အိမ်ကလူက လာပေးစာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အကွာအေ၀းက အရေး မဟုတ်ပါဘူး။ သော့အပိုက မိုင်တရာ အကွာမှာ ရှိနေပါစေ ခုနက နည်းနဲ့ သင့်ကား တံခါးကို အလွယ်တကူ ဖွင့်နိုင်တာ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကြောင့်ပါ။
(၃) ဖွက်ထားတဲ့ အပို ဘက္ထရီ
သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း ဓာတ်အား သိပ်နည်းလာပြီဆိုပါစို့။ *3370# ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းက အရေးပေါ်သုံး ချန်ထားတဲ့ ဓာတ်အား ကို ပြန်ဖွင့်ပေးပြီးနောက် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းက ဓာတ်အား ထက်၀က် ကျန်သေးကြောင်း ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဓာတ်အား ပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ သာမန်နဲ့ အရေးပေါ်သုံး နှစ်မျိုးလုံး အတွက် ဓာတ်အားကို ပြန်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ Safety first !!! ပါတဲ့။
(၄) အခိုးခံရတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သူတပါး သုံးလို့ မရတော့အောင် ဘယ်လို ဖျက်ဆီး ပစ်မလဲ။
သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ နံပါတ်စဉ်ကို သိဖို့ *#06#ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဂဏန်း ၁၅လုံး (ဆယ့်ငါးလုံး) ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။ အဲဒီ ဂဏန်း ဆယ့်ငါးလုံးဟာ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း (handset) အတွက် သီးသန့်ပါ။ ဒီ ဂဏန်းတွေကို ချရေးပြီး လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ တနေရာမှာ သိမ်းထားပါ။ သင့်ဖုနး် အခိုးခံရတဲ့ အခါမှာ သင်ဟာ ဖုန်း ကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဂဏန်း ဆယ့်ငါးလုံးပါ ကုဒ်ကို ပြောပြ တိုင်တန်းလိုက်ပြီး သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပိတ်ခိုင်း နိုင်ပါ တယ်။ တကယ်လို့ သူခိုးဟာ Sim Card ကို မထုတ်ရသေးမီ သင်သာ တိုင်တန်းနိုင်မယ် ဆိုရင် Sim card ကိုရော လက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ disable လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ သင့်ဖုန်းထဲက သင့်ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် ထဲက သူတွေ စာရင်းနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် များကိုလဲ သူတပါး သိခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်သလို သင့်အယောင် ဆောင်ပြီး သူတပါးကို သင့်ဖုန်း နံပါတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း ကိုပါ ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင် တိုင်တန်း တာ နောက်ကျလို့ သူခိုးက ပိုလျင်သူ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သင့် Simcard ကိုသာ disable လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သင် ဟာ ဖုန်းနံပါတ်များကို လက်ကိုင်ဖုန်း ထဲမှာ မှတ်သား တတ်သူ ဖြစ်ပါက သင့် ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် ကိုတော့ သူခိုးက ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်နံပါတ်နဲ့ သူတပါးကို ဖုန်းဆက်ခြင်းတော့ မပြုနိုင်တော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အရေးကြီး ဖုန်းနံပါတ်များကို Sim Card ထဲမှာသာ မှတ်သား ထားသင့် ပါတယ်။ ဒီလို ကာကွယ် ထားနိုင်ရင် လက်ကိုင်ဖုန်း ခိုးယူခြင်း ကြောင့် အကျိုး မဖြစ်ထွန်းတဲ့ အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်း ခိုးယူမှုများ လျော့ပါး လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၀ယ်ထားရပြီး တန်အောင် အသုံးချနိုင်ကြပါစေ။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက email မှတဆင့်ပေးပို့ထားတာပါ :101::101::101:
အဲ့ဒါတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာကော အသုံး၀င်ပါသလား?
Cell phone companies are charging us $1.00 to $1.75 or more for 411 information calls when they don't have to. Most of us do not carryatelephone directory in our vehicle, which makes this situation even more ofaproblem. When you need to use the 411 information option, simply dial: (800) FREE 411, or (800) 373-3411 without incurring any charge at all. Program this into your cell phone now. This is the kind of information people don't mind receiving, so pass it on to your family and friends.
*နာက်တစ်ခုက Nokia ဖုန်းတွေမှာပဲရတယ်ထင်တယ်
ဒီ Forward မေးလ်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်ထဲက ပျံ ့နှ့ံ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ဖွက်ထားတဲ့ အပို ဘက်ထရီ ကုဒ် (Code *3370#)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Google လုပ်ကြည့်ရင် Hoax လို့ ပြောပါတယ်။ ဘက်ထရီကို သက်တန်းမတိုးပေးသည့်အပြင် သက်တမ်းများတောင် တိုစေမလား လို့ ထင်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ Code *3370# ရဲ့ အမှန်က အောက်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(Nokia ရဲ့ Codes အချို ့တွေထဲက တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Some Codes here... May work... May not wok...
[red](၁) အရေးပေါ် အတွက်
သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း ဓာတ်အား သိပ်နည်းလာပြီဆိုပါစို့။ *3370# ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းက အရေးပေါ်သုံး ချန်ထားတဲ့ ဓာတ်အား ကို ပြန်ဖွင့်ပေးပြီးနောက် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းက ဓာတ်အား ထက်၀က် ကျန်သေးကြောင်း ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဓာတ်အား ပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ သာမန်နဲ့ အရေးပေါ်သုံး နှစ်မျိုးလုံး အတွက် ဓာတ်အားကို ပြန်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ safety first !!! ပါတဲ့။[/red]
အပေါ်က နှစ်ချက်က လက်ကိုင်ဖုန်း အားလုံးနီးပါးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကားတံခါး ဖွင့်နည်းကတော့ ကျွန်တော် မစမ်းဖူးဘူး။ ရတယ်တော့ ပြောတယ်...
နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ သိဘူး။ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှာ သွားမေးကြည့်ရင်တော့ သိရမှာပါ... :d
ဒါနဲ့.. ဖုန်း Bill မတက်အောင် ပြောလို့ရတဲ့နည်းလေးများ ရှိဘူးလားဟင်...
someonedevil wrote: »
ဒါနဲ့.. ဖုန်း bill မတက်အောင် ပြောလို့ရတဲ့နည်းလေးများ ရှိဘူးလားဟင်... :d
ဖုန်းကို သူများကို ရောင်းလိုက်ပါ ... :d:d:d:d
Mr.Blade wrote: »
၁၁၂ ကတော့ တကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 112 ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တာမို့ ၊ ဖုန်းမှာ ဘတ္တရီရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆင်းမ်ကဒ်မလိုဘဲ အရေးပေါ်ဌာနကို ခေါ်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ၉၉၉ လား ရှိတယ်ထင်တယ်၊ သို့သော် သို့သော် ရချင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ Simcard ထုတ်ပြီးခေါ်ကြည့်ပါလား၊ မရရင်တော့ မရလို့ပေါ့နော်. မရဘူးဆိုရင်လည်း သည်းခံပေါ့နော်။ ဖြစ်လာမှာပါ၊ လုပ်နိုင်မည့်သူက လုပ်ခွင့်မရသေးလို့ ဖြစ်နေတာလို့ သည်းခံလိုက်ပါ။